ဒီဟာကို LEGO NINJAGO Seabound အစုံထွက်ရက်စွဲလား။
11 / 04 / 2021 11 / 04 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 1358 Views စာ0မှတ်ချက် ဇွန်လ, အမွေအနှစ်, Lego, Lego Ninjago, Lego Ninjago အမွေအနှစ်, Ninjago, NINJAGO အမွေအနှစ်, NINJAGO ရာသီ 15, NINJAGO x Uniqlo, nya, ရာသီ 15, ရေပက်, Tommy Andreasen, ရေအောက်, UNIQLO, ရေ, လှိုငျး, စိုစွတ်သော
၏နောက်လှိုင်း Lego Ninjago ပင်လယ်ထဲသို့ ဦး တည်နေပုံရပြီးအွန်လိုင်းပူးတွဲပါ ၀ င်သည့်နေရာများသို့ရေငုပ်မည့်အချိန်တွင်အွန်လိုင်းအတွေ့အကြုံအသစ်တစ်ခုပေါ်ထွက်လာနိုင်သည်။
Lego Ninjago ဒီနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာနနိဂ်အသင်းကိုသူတို့ရဲ့ကမ္ဘာလှိုင်းတွေအောက်မှာစူးစမ်းလေ့လာနေတဲ့ရန်သူတွေကိုရှာဖွေနေတဲ့ပုံမှာပါ ၀ င်နေပါတယ်။ ပိုစတာ on Lego ဘဝ.
အခုဆိုရင်ဒီသီချင်းကို ၃၆၀ ဒီဂရီလှည့်လည်ကြည့်ရှုခြင်းကဇာတ်လမ်းတွဲတွေအတွက်ဖြန့်ချိမယ့်ရက်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဇာတ်ကောင်တွေပါတဲ့အပိုင်းမှာရေ ninja နဲ့ဆက်စပ်တဲ့မော်ဒယ်မျိုးစုံဟာဇွန်လမှာညရောက်တော့မယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။
ဒီထိပ်ပေါ်မှာဖွယ်ရှိသည် နောက်ထပ်နှစ်ခု Ninjago အစဉ်လိုက်အစုံလိုက်များသည်ဆိုက်ပေါ်တွင်သီးခြားဖော်ပြပြီးဖြစ်သည် Lego လာမည့်ရာသီသည်အသင်း၏အသစ်သောအသင်းကိုအဓိကထားလိမ့်မည်ဟုအုပ်စုကထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
ကတည်းကကတည်းကNinjago: Seabound 'မှာ st ရှိတယ်artမင်းရဲ့ဘဝတွေကိုမင်းရဲ့ဘဝထဲကိုရောက်အောင်တက်လှမ်းလိုက်တာကဒီလှပတဲ့မာရ်နတ်ကိုထူးချွန်ထက်မြက်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကမှမကစားဘူးဆိုတာကိုပြတာကသင့်လျော်ပါတယ်။ @G_Panton .
သူ၌ကြီးသောအစီအစဉ်များရှိပြီး Ninja ကိုအလုပ်များနေမည်မှာသေချာသည်။
Giles ကို NinjaGOOD ကြိုဆိုပါတယ်။ pic.twitter.com/CT20rU6CSn
ကျွန်ုပ်အကြောင်းမမေးပါနှင့် Ninjago လေကြောင်းလိုင်း !!! (@TommyAndreasen) ဧပြီလ 7, 2021
ဒီစုံတွေထဲကတစ်ခုကလွိုက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကမ္ဘာ့ကြော်ငြာပြန်လည်တည်ဆောက်။ Tommy Andreasen ရဲ့ tweet တစ်ခုကြောင့်ရာသီသစ်ကို Seabound လို့အမည်ပေးရမယ်ဆိုတာလည်းသိပါတယ်။
လာမည့်အကွာအဝေးအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုလေ့လာသည့်အခါသင့်အားကျွန်ုပ်တို့အသိပေးပါမည် Ninjago နှင့် Ninjago အစဉ်အလာပုံစံများ၊ သို့သော်သင်အဓိကအကြောင်းအရာအတွက်အသစ်သောအကြောင်းအရာများကိုသင်ကြိုးစားလိုပါက UNIQLO သည်အသစ်တစ်ခုကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် အဝတ်အစားလိုင်း.
← ပြီးခဲ့သည့်ရွှေ LEGO NINJAGO Legacy minifigures နှစ်ခုကိုပိုမိုကြည့်ရှုပါ
LEGO 71030 Looney Tunes ၏စုဆောင်းထားသော Minifigures review - update လုပ်! →